करकरको कर राजस्व | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण करकरको कर राजस्व
करकरको कर राजस्व
बद्री विक्रम थापा
आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको देश समृद्ध भएको देख्न नचाहने जनता विरलै होलान् । जन्मभूमि जन्म दिने आमाजस्तै प्यारो हुन्छ । त्यसैले आफू जन्मेको देशमा बसेका सबै नागरिकले आफ्नो आयबाट राज्यलाई समृद्ध पार्नका लागि कर तिर्छन् । त्यस कार्यका लागि कोही पनि हिच्किचाउँदैनन् र त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भ भने अलि फरक छ । नेपालका नागरिकहरू स्वतस्फूर्त राज्यलाई कर तिर्न किन मान्दैनन् ? सरकारले कर राजस्व असुलीलाई सबल बनाउन किन अनेकौं नारा तय गर्नुपर्दछ ? कुनै कर सहभागिता वर्ष कुनै कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष कुनै करमा लागेका विभिन्न शुल्क तथा जरीवाना छूट आदिआदि नारा बनाइन्छन् । जनतालाई कर बुझाउन भन्दै राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर करकर किन गरिरहनुपरेको छ ? यसरी करकर गर्दा समेत धेरै नागरिकले कर तिर्न नचाहनु वा करबाट भाग्नुको कारण के हो त ?
राजस्वमा राष्ट्रसेवकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका
कर प्रशासनमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सेवा र सहयोगी मनोवृत्ति लिएर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसका मुख्य तीन कारक तत्त्व देखिएका छन् : १. नातागोता-इष्टमित्रको सञ्जालले गर्दा समाजिक परिवेशमा भोलिका दिनमा आफ्नो अस्तित्वको खोजी २. सरुवा र बढुवाका कारणले झेल्नुपर्ने मानसिक तनाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेप ३. घर परिवारका सदस्यको आर्थिक तथा भौतिक सुविधाको महत्त्वाकाङ्क्षा असीमित रूपमा बढ्दै गएको परिवेशमा पूरा गर्न नसकिने आर्थिक दायित्व ।
कर राजस्वमा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफू त्यहाँ कार्यरत रहँदा डर, त्रास देखाएर भए पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिनरात खटिएका हुन्छन् । तर, त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा, सेवात्याग वा अवकाश प्राप्त गर्नासाथ करको दायराबाट बाहिरिन्छन्, किन ? उनीहरू त अन्यत्र जाँदा अरूलाई कर बुझाउन लगाउने मार्गनिर्देशकका रूपमा समाजमा दूत भएर जानुपर्ने हो । तर, कर छल्ने र नबुझाउने तरीका सिकाउँछन् । उनीहरूलाई थाहा छ- कर बुझाएपछि के हुन्छ । सङ्कलित कर राज्यको नेतृत्व गर्ने सरकारले आमजनतालाई लाभान्वित हुने कार्यक्रममा खर्च गर्दैन । एउटा व्यक्ति वा समूहविशेष र वितरणमुखी योजनामा खर्च गर्दछ । त्यही भएर पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारीबोध नभएको हुन सक्छ ।
उच्चपदस्थमा कर राजस्व
समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा निम्न आय भएका जनता मात्र कर तिरेर सहभागी हुनुपर्ने हो त ? उच्च पद धारण गरेका राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पाउने सुविधामा राज्यलाई कर बुझाइएको छ त ? आयकर ऐनमा के समेत उल्लेख गरिएको छ भने- भान्से, बगैंचे, सवारीचालक, सवारीसाधन, आवासगृहजस्ता सुविधा सरकारले उपलब्ध गराएको छ भने त्यस्ता सुविधाको समेत आयमा समावेश गरेर कर तिर्नुपर्दछ । तर, त्यस्ता व्यक्तित्वसँग करको ‘क’ पनि उच्चारण गरिँदैन किनभने बिरालाको घाँटीमा मुसाले घण्टी झुण्डयाउन सक्दैन ।
सार्वजनिक पद धारण गर्नेमा कर राजस्व
सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न एकाइका उच्च पदमा रहेकाहरूले विभिन्न तरीकाबाट चन्दा-उपहार तथा पारिश्रमिकस्वरूप नगद तथा जिन्सी प्राप्त गरेका हुन्छन् । उनीहरूले सरकारी स्रोत र साधनको पनि उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले पनि निर्वाध रूपमा अनेकौं सुविधा दिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो सुविधा उपभोग गरेकासँग उनीहरूको आयमा समावेश गरेर कर असुल गरिँदैन ।
निर्वतमान पदमा रहेकासँग कर राजस्व
सरकारले राज्यका विशिष्ट वा अति महत्त्वपूर्णपद धारण गरिसकेका निवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आदिलाई सुरक्षाकवचसहित सवारीसाधनसमेत प्रदान गर्छ । उनीहरूलाई सवारीसाधनमा प्रयोग गर्ने इन्धन तथा मर्मत खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । यस्ता सुविधा प्रयोग गरेबापत निजको अन्य आयमा समावेश गरेर कर असुल गर्नुपर्ने हो । तर, राज्यले सो गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन ।
राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनेमा कर राजस्व
राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर विभिन्न स्रोतबाट आयआर्जन गरेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताले राज्यलाई कर तिरेका छन् ? त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा आउन अपील मात्र गरेमा कालोमोसो र कालो झण्डाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अथवा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू दुर्गमतिर सरुवा हुनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस किसिमको त्रासले राष्ट्रसेवक कर्मचारी चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन ।
गैरकर राजस्व सवारीसाधन
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा सवारी चालकले देवनागरी लिपिमा इनामेलले लेखिएको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्लाष्टिकको प्लेटमा डिजिटल प्रिण्ट गरिएका नम्बर प्लेट लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियमानुसार लेख्न नपाउने भएपछि एक-दुईओटा सवारीसाधनमा त्यस्तो नम्बर लगाउनासाथ रोक्नुपर्ने थियो । ४ लाखभन्दा बढीले प्लाष्टिकको डिजिटल नम्बर प्लेट लगाएपछि बल्ल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यस्तो नम्बर प्लेट लगाउन नपाउने भए त्यस्तो प्रविधि भित्र्याउन नै रोक्नुपर्दथ्यो । जनतालाई अप्ठयारोमा पारेर गैरराजस्व सङ्कलन गर्न कुनै दिन मद्दत हुन्छ भन्ने सोचले सरकारले यस्तो गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आधुनिक युगमा नयाँ प्रविधिलाई स्वीकार गर्न सकिने नीतिनियमको तर्जुमा गर्दै जानुपर्ने हो । तर, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने चलन कायम राख्न खोजियो । सरकारको कर असुलीको लक्ष्य प्राप्ति गर्नकै लागि यसो गरेको भए असुल गरोस् । जनता सोझा छन्, जसो गरे पनि तिर्न कुनै हिचकिच गर्दैनन् । तर, सरल र सहज ढङ्गबाट सेवा सुविधा पाउनुको सट्टा जटिलता भएको करदाताको मनमा परेको छ । यसले राज्यलाई कुनै पनि किसिमले हित गर्दैन ।
एक समय मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम लगाइएको थियो । यसरी मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले हेलमेट नलगाएको भन्दै जरीवानाका रूपमा गैरकर राजस्व असुली गरियो । करको लक्ष्य प्राप्ति भएपछि यो नियमलाई क्रियाशील गराइएन । जुन वर्ष कर असुलीको लक्ष्य पुग्दैन, त्यो वर्षफेरि यस्तो नियम क्रियाशील हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन ।
कर राजस्व परीक्षणमा झेल्नुपर्ने दुःख
करदाताले आय विवरण बुझाउने प्रक्रियादेखि अनेकौं सास्ती खेप्नुपर्दछ । करदाताले आफ्नो आय विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर बुझाइसकेपछि राजस्व कार्यालयले विज्ञ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेर जाँच गराउनुको सट्टा अर्धदक्ष राष्ट्रसेवकले परीक्षण गर्दछ । छूट दिने/नदिने उसको स्वविवेकमा भर पर्दछ । अर्कोतर्फकर चुक्ता प्रमाणपत्र पाएको करदाता ५ वर्षसम्म निर्धक्क हुन सक्दैन । कुन बेलामा जाँचपडताल हुन्छ । नयाँ कर्मचारी कथमकदाचित जाँचपडतालमा पर्यो भने ऊ पुरानो निर्णयमा प्रस्ट हुन सक्दैन । अनि थप कर र जरीवाना तिर्नुको विकल्प करदातासँग हुँदैन ।
कुनै पनि नागरिकलाई राज्यप्रतिको दायित्व पूरा नगरौं भन्ने त अवश्य पनि लाग्दैन होला । कर तिर्ने विषयमा पनि नागरिकहरू जिम्मेवार नै हुनुपर्ने हो । तर, उल्लेखित कारणहरूले गर्दा करकरले मात्र कर तिर्नुपरेको होला ।
लेखक एक विकास बैङ्कमा कार्यरत छन् ।